6 Hevitra marketing amin'ny atiny ambany momba ny tetibola ho an'ny orinasa madinidinika
Alatsinainy Oktobra 8, 2018 Alatsinainy Oktobra 8, 2018 James Daily
Fantatrao sahady fa tsy manana teti-bola marketing ianao hifaninana amin'ireo “zazalahy lehibe.” Fa ny vaovao tsara dia izao: ny tontolon'ny marketing dizitaly dia nampitovy ny saha tahaka ny teo aloha. Ireo orinasa madinidinika dia manana toerana sy taktika marobe izay mahomby sy lafo vidy. Ny iray amin'ireny, mazava ho azy, dia ny marketing amin'ny atiny. Raha ny marina dia mety ho lafo indrindra amin'ny paikady marketing rehetra izany. Ireto misy tetika marketing amin'ny atiny